7 Antony Nahoana no Maty ny endrika mitarika | Martech Zone
Na ny mpivarotra nomerika na ny fivarotana biriky sy rihitra dia eo am-pitadiavana fomba vaovao sy vaovao hisamborana fitarihana maro kokoa ary hanovana azy ireo ho mpanjifa mandoa vola. Ny filazana fa fanamby lehibe io dia mety ho fanalam-baraka be loatra, satria ny fahatongavan'ny internet dia nahatonga ny fifaninanana ho matanjaka ho an'ny indostria rehetra eritreretina.
Nandritra ny taona maro dia nametraka endrika "Mifandraisa aminay" ao amin'ny tranonkalany ireo mpivarotra am-ponja miaraka amina fanantenana fa hifandray amin'izy ireo ireo mpitsikilo liana. Ireo endrika "Mifandraisa aminay" ireo no antsoin'ireo mpivarotra nomerika hoe "Static Lead Forms;" ary na dia nanatanteraka tanjona 10-15 taona lasa aza izy ireo dia tsy dia nahomby toa ny taloha intsony. Raha ny marina dia handeha hiteny aho maty tsara izy ireo.
Araka ny efa noresahiko tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, ny haino aman-jery fifandraisana dia nanjary nalaza kokoa teo amin'ireo mpivarotra (na ny nomerika na ny birika & ny feta), ary manolo haingana ny filan'ny forme firaka. Na izany aza, mety hanontany tena ianao hoe: "Raha mbola mampiasa forme static ny mpivarotra dia maninona no heverinao fa maty izy ireo?"
Ireto misy antony 7 matoa maty ny endrika mitarika:
1. Tsy misy te-hameno endrika static intsony
Nandritra ny taona vitsivitsy lasa, ny endrika mitarika static dia nanjary haingo fotsiny. Tsy misy olona tena miraharaha ny endrika firaka intsony; ary tsoriko fa ireo mpanjifa ireo dia tsy mahazo na inona na inona sarobidy amin'ny fandefasana ny mombamomba azy ireo. Aorian'ny andefasan'izy ireo ny mombamomba ny fifandraisany dia toy ny hoe miditra anaty lavaka mainty izy io… mandra-piantsoin'ny mpivarotra azy ireo mazava ho azy.
Aorian'ny fandefasan'ny mpanjifa ny mombamomba ny fifandraisany, ny antenaina dia olona avy amin'ilay orinasa no hahatratra ny loharanom-baovao tadiavin'izy ireo. Raha izao, raha nianatra zavatra amin'ny maha mpivarotra an-tserasera matetika ahy aho, ny tena tanjon'ireto taratasy ireto dia ny mahazo ny mombamomba azy ireo ary hivarotra azy ireo. Indraindray kolokoloina ny fitarihana ary indraindray tsy. Na izany na tsy izany, ny ankamaroan'ny mpanjifa izay mameno an-tsitrapo ny firaketana dia mety mbola eo an-tampon'ny fantsom-pividianana (na amin'ny sehatry ny fikarohana) - midika izany fa mbola tsy vonona ny hividy izy ireo.
Ery dia teboka iray amin'ny fotoana namenoana ny form form static dia zavatra nataon'ny mpanjifa fotsiny hahazoana fampahalalana fanampiny. Saingy, noho ny fisian'ny Internet, nanjary nisafidy ny mpanjifa ny vokatra sy serivisy ampidiriny - ary ara-dalàna izany! Mbola betsaka lavitra ny safidy azon'ny mpanjifa isafidianana, ka manokana fotoana hanaovana izany fikarohana izany izy ireo. Raha mbola mitady fampahalalana fanampiny izy ireo dia mety tsy te hamidy eo noho eo.
Ny traikefa mifandraika (na endrika mitarika interactive) dia misongona haingana ireo endrika mitarika static ho fomba fampiasa amin'ny fisamborana firaka eo amin'ireo orinasa an-tserasera. Ny anton'izany dia satria mamela ny mpanjifa hiresaka 2-mpandray anjara amin'ny tranokalanao mba hahazoana ny valiny tadiavin'izy ireo.
Andao lazaina, ohatra, ny mpanjifa iray te-hahafantatra izay safidy ara-bola mety indrindra amin'ny toe-javatra misy azy ireo alohan'ny hividianana fanaka. Ohatra tsara amin'ny traikefa ifanakalozana sarobidy fanombanana izay manombana ny mpanjifa amin'ny fototra tsirairay (mifototra amin'ny fampahalalana tokana omeny) ary manome azy ireo vahaolana azo inoana. Mazava ho azy fa mitondra any amin'ny teboka manaraka….
2. Ny traikefa an-tserasera dia mamokatra taha ambony amin'ny fifamatorana
Tsy toy ny endrika mitarika static, ny traikefa ifaneraserana dia mamela ny mpanjifa hiresaka amin'ny tranonkalanao. Raha tokony ho "famenoana ny banga" (anarana, mailaka, telefaona, fanehoan-kevitra), dia misy resaka sy valiny maromaro mifampiresaka. Noho io antony io, matetika ny tahan'ny fifandraisan'ny tranonkala dia avo kokoa noho ny an'ny tranonkala manana endrika firaketana tsy miova.
Ny iray amin'ireo karazana traikefa mahazatra mahazatra dia ny fanombanana. Ao anatin'ny traikefa fanombanana, ny marika dia manontany ny mpanjifa amin'ny fanontaniana samihafa mba hanatsoahan-kevitra momba azy ireo ary hanome azy ireo vahaolana mety amin'ny olan'izy ireo ankehitriny. Andao lazaina, ohatra, ny mpanjifa iray mitsidika tranokalan'ny trano misy trano sarotra ary manandrana mamantatra izay drafitra rihana hiarahany (ary misy zavatra maro azo isafidianana). Hay izany fa olana mahazatra ho an'ny mpanofa trano maro io. Ny fomba tsara hamahana ity olana ity ary hanamafisana ny fahatokisan'ny mpanjifa dia ny famoronana tombana izay manome sosokevitra momba ny drafitra. Ao anatin'ity traikefa ity dia manontany fanontaniana mifono safidy maro mifandraika amin'izany ny tranonkala (Eks: "Firy ny olona ao amin'ny fianakavianao? Manan-janaka ve ianao? Manana biby fiompy lehibe ve ianao?") Ary ny valiny nomen'ny mpanjifa dia hanome fehin-kevitra .
Ankehitriny, azonao ve ny tiako holazaina rehefa miteny aho hoe "afaka mifampiresaka amin'ny tranonkalanao ny mpanjifa?" Mametraka fanontaniana ny tranonkala ary mamaly ny valin'ireo fanontaniana ireo ny mpanjifa. Satria matetika ny resaka dia somary lava kokoa noho ny famenoana endrika fotsiny, midika izany fa lava kokoa ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny tranonkalanao. Ankoatr'izay, aorian'ny nanomezana ny mpanjifa vahaolana mety (andao lazaina, ho fanazavana, dia efitrano fandraisam-bahiny 2-efitrano, 1.5 no fidiovana), tsara ny manantena fa hijanona ao amin'ny tranonkalanao ny mpanjifa ary hanao fikarohana bebe kokoa momba an'io vahaolana io (na drafitra gorodona). Tsy manome vahaolana eo noho eo ny endrika fitarihana static; Ka inona no tena antony tokony hijanonan'ny mpanjifa eo amin'ny tranonkalanao mandra-piantsoin'izy ireo ny mpivarotra? Izany no mahatonga ny fiankinan-doha matetika ambany kokoa amin'ny tranokala misy endrika mitarika static.
3. Miaraka amin'ny fifamofoana avo kokoa dia misy fiovam-po avo kokoa
Araka ny efa noresahiko teo aloha, ny olon-tsotra dia tsy liana amin'ny famenoana endrika static. Averina indray, mandeha any amin'ny banga tsy fantatra ny mombamomba azy ireo (mandra-pahatongan'ny mpivarotra azy ireo, izay matetika no misy izany) ary tsy mahazo zavatra sarobidy avy hatrany izy ireo aorian'ny nanaterany ny mombamomba ny fifandraisana. Amin'ny lafiny maro, mahatsapa ny mpanjifa fa voafitaka izy ireo. Nampanantena zavatra sarobidy izy ireo, fa aza mahazo foana. Izany no mahatonga ny mpanjifa tsy mameno endrika static intsony.
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny traikefa ifanakalozan-dresaka hahomby tokoa dia satria mamela ny marika hanome toky azon'izy ireo atao! Raha tokony hiandry fampahalalana fanampiny avy amin'ny rep mpivarotra izy ireo dia afaka mahazo vahaolana ao anatin'ny minitra vitsy. Raha azo antoka ny vahaolana eo noho eo ny mpanjifa, dia tsy ny fanombohana ny traikefa fotsiny no hataony; hamita ny zavatra niainany izy ireo ary hanova ny mpanjifa ho lasa mpitarika tanteraka. Ny mpanjifa dia tsy te hiandry olon-kafa hanomezana azy ireo ny sandan'ny varotra fiarany, ary tsy te-hamaly amin'ny drafitra gorodona lafo vidy ao amin'ny trano sarotra izy ireo. Aleon'ireo mpanjifa mametraka ny atodiny anaty harona iray alohan'ny hidirany amin'ny fividianana / fanofana aza.
Ny vahaolana amin'ny olan'ny mpanjifa dia ny fandrisihana farany ho azy ireo hamita ny zavatra niainany. Ny tiako holazaina dia azo antoka - mety ho elaela kokoa ny traikefa ifaneraserana (satria mila mamaly fanontaniana ny mpanjifa mba hahitana ny valiny), fa raha midika izany fa mahazo zavatra sarobidy avy hatrany izay hanampy azy ireo amin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo hividy dia handray ny fotoana fanampiny. Ary mazava ho azy fa mazava izahay fa ny insentif dia mety amin'izay tianao irina. Mety ho sanda ara-barotra, tombana (na tatitra), tapakila na fihenam-bidy, boky e - na inona na inona irin'ny fonao.
4. Ny traikefa ifaneraserana dia azo ovaina tanteraka
Tsy maninona izay mitsidika ny tranonkalanao, ny endrika fitarihana tsy miovaova dia hijerena sy hiasa tsy miova. Misy toerana iray hamenoana ny anaranao, ny nomeraon-telefaonanao, ny adiresy mailakao, ary indraindray misy toerana anaovana fanontaniana na fanamarihana. Amin'ny ankapobeny dia ny habetsaky ny endrika mitarika static. Indraindray ianao dia afaka manova fanontaniana iray ary indraindray tsy afaka. Na izany na tsy izany, sambo iray voalohany ny misambotra ny mombamomba ny fifandraisana - ary tsy misy mihoatra izany.
Na izany aza, ny traikefa ifanakalozana dia manana fahafaha-manao tsy manam-petra hanaovana fanaingoana. Ny traikefa ifaneraserana dia tsy vitan'ny hoe mikendry ny tanjon'ny orinasanao ihany, fa manome ny filan'ny mpanjifanao koa. Ny fepetra tokana omena an'ireo traikefa noforoninao dia ny fampanantenanao zava-dehibe. Izy io dia mety ho tombana, fihenam-bidy, sanda ara-barotra, fidirana sweepstakes - izay mety hitaona ny mpanjifanao ampy hahatonga azy ireo hamita ny traikefa iray.
Ankoatry ny fahafahanao manamboatra ny karazana traikefa tena izy (sy manamboatra ireo fanontaniana), ny zavatra mahafinaritra hafa dia ny fanaraha-maso feno ny marikao amin'ny fisehon'ny traikefa ifanakalozana. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny volavolan-doko, hatrany amin'ny sary, ary ny tena zava-dehibe, ny marika, dia miankina amin'ny fahendren'ny mpamorona. Inona no fomba tsara kokoa hanamarinana ny marikao noho ny fampifangaroana azy amin'ireo endrika mitarika mifandraika amin'izany? Tsy ny mpanjifa ihany no hahafantatra fa mandeha mivantana aminao ilay fampahalalana, fa ilay marika kosa hampindrana ny hevitra fa mahazo izay tadiaviny izy ireo.
Heveriko fa ny teboka ezahiko hatao dia ny mahaliana ireo karazana traikefa rehetra ireo. Tsy endrika tsotra mamela anao hiditra lahatsoratra fotsiny izy io. Tsy mila “miresaka amin'ny rindrina” intsony ny mpanjifa. Afaka manangona fampahalalana manokana avy amin'ny mpanjifa ny tranonkalanao ary mamokatra zavatra sarobidy mifototra amin'ny fampahalalana nangonina. Tsy afaka manao an'io ny firaketana fironana static.
5. Mora kokoa ny manavaka ny tenanao amin'ireo mpifaninana aminao
Na dia tsy malaza aza ny endrika fitarihana statika ho an'ny mpanjifa manontany momba ny fampahalalana bebe kokoa dia mbola misy orinasa an-taonina misafidy ny hamelaka ireo takelaka ireo amin'ny tranonkalany. Ary na dia mitombo tsy mitsaha-mitombo aza ny isan'ny marika mampiasa traikefa ifanakalozana, ny marikao dia hisongadina eo amin'ireo mpifaninana aminy. Nahoana? Andao holazaina ny mazava ho azy - tsy ny rehetra no mampiasa atiny mifandray amin'ny filany hisamborana azy ireo. Raha mametraka karazana traikefa ifandraisana amin'ny tranokalanao ianao, dia hisongadina avy hatrany amin'ny mpanjifanao izany. Raha tokony hameno ny endrika tsy miovaova mahazatra sy miandry valiny dia mamaly fanontaniana sy zavatra misy lanjany izy ireo. Ny zavatra niainana fotsiny dia hafa be dia be.
Faharoa, tsy tokony hadinontsika ny lafiny fanaingoana ireo endrika fitarihana interactive. Tsy ny fisehoana ankapobeny amin'ny endrika fitarihana interactive ihany no hisongadina ao an-tsain'ny olona iray, fa ny tena traikefa (ny fanombanana, ny fanombanana ara-barotra, ny quiz, ny lalao, sns.) Dia tsy hay hadinoina ary zavatra mety ho zakan'ny mpifaninana aminao tsy manao…. nefa.
6. Tsy afaka misambotra ny habetsaky ny data ilaina ny mpivarotra nomerika
Inona avy ireo saha mahazatra indrindra hitanao amin'ny endrika mitarika static? Anaran-telefaona, telefaona, adiresy mailaka, karazana fangatahana (matetika midina) ary indraindray faritra iray hanaovana fanehoan-kevitra sy fanontanina. Tsy fampahalalana marobe izany, sa tsy izany? Ny mombamomba ny fifandraisan'ny mpanjifa iray dia tsy manome fahitana momba ny mampiavaka an'io mpanjifa io. Tsy misy fampahalalana momba ny safidin'ny fiantsenana, ny fizotry ny fiantsenana, ny tombontsoan'ny mpanjifa - mitohy ny lisitra. Satria tsy dia misy fanaingoana mifandraika amin'ny endrika mitarika static, tsy afaka mametraka fanontaniana amin'ny mpanjifa momba ireo zavatra tadiavin'ny marikao ianao.
Raha jerena ny fomban'ny tarehimarika mifandraika azo adika, ny marikao dia mifehy tanteraka ny fanontaniana rehetra apetraka aminao. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny zavatra tian'ny mpanjifa hividy izy ireo na raha te hahalala momba ny safidy momba ny famatsiam-bola izy ireo dia manontany fotsiny. Zava-dehibe ny fametrahana ireo fanontaniana manokana an'ny mpanjifanao ireo satria manampy anao (ilay mpivarotra dizitaly) hahafantatra tsara kokoa ny momba ny mpanjifanao sy ny fomba hivarotana amin'izy ireo amin'ny ho avy.
Ho fanampin'ny fanampiana ireo mpivarotra dizitaly toa anao, ny ekipanao varotra (raha azo ampiharina) dia afaka manivana ny vaovao voaray hatramin'ny ambaratonga tsirairay, manangana mombamomba ny mpanjifa ary manamboatra ny fanarahan-dia ataon'izy ireo amin'ny fampahalalana tokana ao amin'ny mombamomba azy ireo.
7. Ireo mpanjifa dia mitazona fampahalalana bebe kokoa
Miaraka amin'ny fahaizana mametraka fanontaniana tsy manam-paharoa, ny traikefa ifanakalozana dia manome marika ihany koa ny marika ahafahana mampahafantatra sy mijanona ao an-tsaina hatrany. Taorian'ny nahavitan'ny mpanjifa traikefa iray nifandray tamin'ny tranokalanao (ary nahazo ny fanentanana azy ireo tamin'ny endrika fanombanana, fanombanana, fihenam-bidy, sns.), Ny marikao dia afaka manome fampahalalana sarobidy kokoa - angamba amin'ny fomba tena hampiasana ny fandrisihana azon'izy ireo nomena. Andao lazaina, ohatra, mpanjifa mitsidika tranokalan'ny mpivarotra ianao. Mameno ny fanombatombanana varotra ianao ary omena anao ny sandan'ny varotrao.
Inona ary? Eny, io mpivarotra io dia mety hanolotra fampahalalana fanampiny momba izay azon'izy ireo atao hahazoana antoka ireo fitarihana fiara azo mahazo ny tombam-bidiny indrindra amin'ny varotra. Mety ho amin'ny endrika safidy traikefa fanampiny azo ifandraisana. Ny traikefa iray dia ny fanombanana raha tokony hividy "efa niasa na vaovao" izy ireo, ary ny iray hafa dia mety momba ny fitadiavana ireo safidy famatsiam-bola tsara indrindra. Na inona na inona ny traikefa voafidy, izany fampahalalana fanampiny izany dia ahafahan'ny mpanjifa mieritreritra ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny amin'ny marikao. Ary koa, andao hanao ny marina tanteraka - arakaraka ny maha-ambony azy ireo sy ny fisongadanan'ny marikao no mety hahatadidiavan'ny mpanjifa iray fotsiny ny marikao.
Tags: atiny fifandraisanamarketing marketinghaino aman-jery fifandraisanaendrika firakamaty ny endrika firakamarketing toolsPERQCTA marani-tsaina
Jan 30, 2017 ao amin'ny 9: 09 AM
Hitanay tanteraka izany. Ny endrika miorina dia nivadika ho fandrika spam raha ny fanombanana sy ny pejy mifandrohy, ny fandraisana anjara dia mitondra fitarihana sy fifanakalozana tsara kokoa. Lahatsoratra mahatalanjona!
30 Jan 2017 amin'ny 2:04 PM
Manana ohatra tsara amin'izany ve ianao? Heveriko fa voadinika tsara ilay teboka ary milanja lanja. Na izany aza, raha mamela hevitra dia mila mameno endrika 3 ianao. #ironic 🙂
30 Jan 2017 amin'ny 2:09 PM
Best. Comment. Mandrakizay.
Mar 1, 2017 amin'ny 10: 10 AM
Lahatsoratra mampahalala! Ankasitrahana indrindra. Fa mitandrema kosa azafady rehefa manome ohatra. Vondron'olona iray manontany hoe "Manan-janaka ve ianao?" dia manitsakitsaka ny lalàna momba ny fanjakan'ny foibe federaly. Nanjary kilasy arovana ny satan'ny fianakaviana tamin'ny 1988. Misaotra betsaka!
Mar 1, 2017 amin'ny 10: 14 AM
Hevitra lehibe - misaotra anao tamin'ny fanentanana ny momba an'io!